waiziva here nezve ino yakavanzwa menyu pasamsung galaxy smartphones?
Kuru Nhau & Ongororo Wanga uchiziva nezve ino yakavanzwa menyu pane Samsung Galaxy mafoni?
Wanga uchiziva nezve ino yakavanzwa menyu pane Samsung Galaxy mafoni?
Mufananidzo:1of6Zvidimbu zvakavanzika zvekodhi zvave zviri chikamu chemakomputa software kwemakumi emakore. Inotaurwa se easter mazai , ivo vanoratidza kumusoro apo yakatarwa (uye kazhinji isina magwaro) seti yemirairo inopihwa - muApple, semuenzaniso, kurova kakawanda pachigadzirwa & apos; s firmware vhezheni inoratidza yakavanzika skrini. Izvo isu & apos; zvatiri kuda kuyambuka, zvisinei, harisi pasita zai. Iyo yakavanzwa menyu inowanikwa pane Samsung Galaxy mafoni uye inogona kushandiswa kuongorora kana chishandiso chiri mukushanda kwakanaka kurongeka.
Saka parizvino iwe & maapos; ungangodaro uchinetseka kuti ungawana sei iyi yakavanzika menyu. Zvakanaka, unoita izvozvo nekuvhura iyo App yefoni uye nekuisa iyo kodhi * # 0 * # sekunge iwe waizoidaidza. Iyo yakanzi menyu ichaonekwa nekukurumidza kana iwe ukapinza chiratidzo chekupedzisira.
Mazhinji esarudzo dzakanyorwa mune ino yakavanzika menyu aren & apos; hainyanyo kufadza. Semuenzaniso, Dzvuku, Girinhi, Bhuruu, uye Dema ngazvitarise iwe screen & apos; s kuburitsa zvikanganiso, senge zvakanamirwa pixels kana kusagadzikana kwemavara. Asi rova ​​Sensor uye iwe & apos; uchaendeswa kune inotonhorera-inotaridzika skrini uko mbichana data kubva yako foni & apos; s maseru anoratidzwa. Zvakare, pane magirafu ekuona kuverenga kubva kune yako accelerometer, gyroscope, uye kambasi. Zvisinganzwisisike, kana ukarova Miedzo yeMufananidzo iwe & apos; ucharatidzirwa mufananidzo weichihuahua. Izvi zvinoreva kuti pane & apos; s pikicha yemumwe munhu & apos; imbwa dzinovaraidza dzakavanzwa mumamirioni eGlifoni mafoni, sekupusa sezvingaite sekunge.
Iyo yeTouch bvunzo inogona kubatsira kana iwe uine kusahadzika nezve yako yekubata sikirini & apos; s chaiyo. Yese rectangle panowanikwa pombi inosimbiswa, uye chigunwe chako & apos; s trace inomiririrwa netambo nhema. Iko & apos; s zvakare iyo Sub kiyi bvunzo yekutarisa kana iyo foni & apos; s capacitive makiyi akarongeka. Iyo Yekugamuchira bvunzo inotarisa iyo yekumusoro yekunyevera kuti itadze kushanda, uye iyo Mutauri bvunzo inoputika isingazivikanwe rwiyo rwepop kuburikidza negudzanzwi.
Saka ndiyo Samsung & apos; s yakavanzwa bvunzo menyu inowanikwa paGreen handsets. Kana iwe & apos; tichinzwa shungu, inzwa wakasununguka kuzvitarisa kana kutsvaga mamwe makodhi akavanzika nenjodzi yako. Une chero kodhi iwe iwe & apos; d yaunoda kugovera? Chikamu chemashoko ndechako chose!
iphone iri nyore mode yevakuru
kudzima Samsung s21
Iyo Galaxy Note 9 S Pen ine akangwara nekukurumidza-kuchaja 'bhatiri' nekamwe kadiki kukanganisa
Verizon (yevatengesi vese) ine Google & apos; s zvechokwadi isina waya Pixel Buds iri kutengeswa pamutengo wavo wakaderera parizvino
Galaxy S6 Inoshanda bhatiri hupenyu bvunzo inoratidza kuti ingasvika sei 3500 mAh kuenda
Motorola DROID Turbo 2 Ongororo
Selenium Dzvanya Unganidzo Na href Kukosha
Deal: AT & T inopa yemahara Apple TV 4K paunosaina-up kune yayo DirecTV IZVO sevhisi
Kuchengetedzwa Kwekutyisidzira uye Kurwisa Vectors
Dzimwe nhare dzeGreen Note 8 dzakakunda & apos; t kuchaja kana kuvhura kana bhatiri rasvika 0%
Selenuim - Vhura Nyowani Bhurawuza Tab